चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज के भयो त्यस्तो ? नेपाली सेना परिचालन गर्नै पर्यो ! « Etajakhabar
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज के भयो त्यस्तो ? नेपाली सेना परिचालन गर्नै पर्यो !
प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०७६, मंगलवार १८:३६
हीरालाल गुरुङ – चाडपर्वका बेला चोरी तस्करी बढ्न सक्ने भन्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणमा नेपाली सेनाले कडाइ गरेको छ । विशेष गरी नेपालीहरुको महान् चाड दशँै, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वसँगै चोरी तस्करीको ध्यान निकुञ्जमा हुन सक्ने भन्दै फरक रणनीतिका साथ निकुञ्जको सुरक्षामा कडाइ गरिएको हो । निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका बटुक दल गणका गणपति प्रमुख सेनानी अरुण श्रेष्ठले चाडबाडका बेला सर्वसाधारणको ध्यान रमाइलो गर्नेतर्फ जाने हुँदा यस्तो समयमा वन्यजन्तुमाथि हुनसक्ने खतरा रोक्न सुरक्षामा कडाइ गरिएको बताउनुभयो ।
निकुञ्जमा सेनाले उच्चस्तरीय प्रविधि सिसीक्यामरा, क्यामरा ट्र्यापिङ, ड्रोन क्यामरा, हात्ती, पैदल, साइकल, मोटरसाइकल, डुङ्गा र रात्रिकालीन एम्बुसको सङ्ख्या वृद्धि गरेको छ । यस्तै निकुञ्जको अति संवेदनशील क्षेत्रमा तालीम प्राप्त कुकुरका साथै हात्तीको प्रयोग गरी विभिन्न स्थानमा ‘सर्च, स्वीप’को कार्यमा जोड दिइएको छ ।
विगतको उपलब्धिलाई कायम राख्नसमेत चुनौती भएकाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर विशेष टोली परिचालन गरिएको गणपति श्रेष्ठको भनाइ छ । “तस्करको निगरानी त छुट्टै छ, जङ्गलबाट चर्दै बस्ती नजिक आएका वन्यजन्तुको सुरक्षामा समेत टोली रातभर नै खटाइने गरिएको छ, उहाँले भन्नुभयो ।” बस्ती नजिक आएका वन्यजन्तुबाट धनजनको क्षति हुने र तस्करले निशाना बनाउन सक्ने भएकाले त्यस्ता वन्यजन्तुका लागि टोली नै परिचालन गरेर रात्रि गस्ती शुरु भएको निकुञ्जले जनाएको छ ।
दुर्लभ एकसिङ्गे गैंँडा र पाटेबाघको मुख्य वासस्थान चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । विगतमा यहाँ तस्करबाट यस्ता वन्यजन्तु मारिने गरिए पनि पछिल्लो वर्षमा भने तस्करको गतिविधि छिटफुटबाहेक शून्य जस्तै छ । निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाका बटुक दल गण र निकुञ्ज कार्यालयका कर्मचारीले निकुञ्जको कडाइका साथ सुरक्षा गरिरहेका छन् । निकुञ्जको अवस्था थाहा हुने गरी दशैँको अवसरमा नेपाली सेनाको ४५ वटा पोष्ट र निकुञ्ज कार्यालयको १३६ वटा पोष्टका सेना र कर्मचारीले निकुञ्जमा ‘स्वीप अप्रेशन’ गरेका थिए ।